Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Bahamas Doomaha Xagaaga ee Bahamas oo hadda ku jira qalab buuxa
Safarka Dalxiiska • Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sawirka inta lagu gudajiray Diyaaradii Bahamas ee Xilliga Xagaaga ee u duulay Bimini waa, bidix ilaa midig, Ahmad Williams, BMOTA; Ciyaaryahanka NFL, DJ Swearinger; Kabtan Richard Treco, BMOTA iyo Jonathan Lord, BMOTA.
Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee (BMOTA) Doomaha Xilliga Xagaaga ee Bahamas ayaa ku jira qalab buuxa. Toddobaad kasta dhammaadkiisa laga bilaabo Juun 10 illaa Ogosto 1, laylisyo iyo khibrad u leh doomaha badda ayaa aadaya badda, iyagoo uga sii gudbaya Gacanka Dooxada illaa Grand Bahama ama Bimini si ay ula kulmaan tacabur noloshooda oo dhan, oo ka bilaabma soo dhaweynno habeysan iyo kalluumeysiga illaa howlo dhab ah, oo dhaqan ku milmay.
Ciyaaryahan caan ah oo NFL ah DJ Swearinger ayaa kaqeyb qaatay Fling to Bimini, oo ay wehliyaan taageerayaasha doomaha.
Tani waa fursad soo jiidasho leh oo si aan caadi aheyn loogu sahamin karo jasiiradaha.
Badweynta furan iyo kabtanno khibrad u leh oo lagu qaso qaar ka mid ah qorraxda, ciidda, iyo badda Bahamian waxay u tahay safarka ugu dambeeya ee wadada badda.
Doontii ugu dambeysay ee lagu tuuray Bimini, Juun 24-27, waxay soo jiidatay ciyaaryahanka caanka ah ee NFL Dayarlo Jamal "DJ" Swearinger Sr., oo safar gaaban ku galay Bimini. Taageerayaasha halyeeyga halyeeyga ah ee sagaalka sano ee NFL iyo ardaydii hore ee Jaamacadda South Carolina waxay ku biireen doonyahooda xiisaha, xusuusta iyo xiisaha 50-mayl.
Kooxda oo ka kooban toddoba iyo toban, oo ka kooban laylisyo iyo halyeeyo ruug-caddaa ah oo ka kala yimid South Carolina, Florida iyo Georgia, ayaa soo jiitay Gulf Stream ilaa Bimini oo ka timi Bahia Mar Marina oo ku taal Fort Lauderdale, doonyo u dhexeeyey 24ft ilaa 33ft. Waxaa hogaaminayay Safiirada Doomaha Bahamian, Kabtanada Robert Brousseau ee South Carolina iyo Isaac Burgos ee Florida iyo Kabtan Richard Treco, oo ahaa Maareeyihii hore ee BMOTA iyo qabanqaabiyaha fallaagada, oo hogaaminayay doonyaha. safarada The Bahamas in ka badan 40 sano.
Waxaan isku xirnaa doomaha xawaare isku mid ah leh, si ay isu fiiriyaan. Waxaan siinaa iskuduwaha GPS oo aan tusnaa sida loo akhriyo khataraha, si ay si nabad ah ugu maraan biyaha Bahamian, ayuu yidhi Treco.
Badweynta furan, qaar kabtan khibrad u leh oo ay weheliyaan laylisyo aad u xiiso badan, dhawr doonyood oo dabcan ah, oo lagu dhex daray qaar ka mid ah qorraxda Bahamian, ciidda iyo badda ayaa loogu talagalay safarka ugu dambeeya ee wadada badda. Maxay ka soo jiidan kartaa fursaddan noocan ah ee lagu sahaminayo jasiiradaha qaab aan caadi ahayn?
Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas, Mr. Reginald Saunders (safka hore, fadhiya midig labaad) ayaa goobjoog ka ahaa shirkii kabtanadii dhawaan ka dhacay Bahia Mar Marina, si uu ula hadlo doomaha kaqeyb qaadanaya doonida doonyaha The Bahamas.
Kooxdu waxay sii joogtay Resorts World Bimini iyo Bimini Big Game Club Resort & Marina, waxayna kaqeybgaleen dhacdooyin dhowr ah oo ka dhacay Bimini iyo hareeraheeda. Kuwaas waxaa ka mid ah, sahaminta goobaha taariikhiga ah ee jasiiradda, la soo qaadashada dadka deegaanka saacadaha farxadda leh ee I-95 Broward Bar & Restaurant oo ku yaal Bimini, Mike's Conch Stand iyo snorkeling oo ku yaal Bimini oo ah goobaha shilalka diyaaradeed ee caanka ah, SS Sapona Shipwreck iyo Honeymoon Harbor, oo ah meel aan la degganeyn jasiiradda u dhow, oo ay ka buuxaan stingrays, reefs qurux badan, dhuxul iyo nolol badeed kala duwan. Qaarkood sidoo kale waxay kaqeybgaleen riwaayad, ay ka muuqato DJ Flo Rida, oo ka dhacday Resorts World Bimini.
Diiwaangelintu wali way u furan tahay foorarka haray, laakiin dhibco ayaa loo hayaa marka hore marka hore, marka hore adeeg loo bixiyo. Duulimaadyada jadwalka loo qorsheeyay waa: Julaay 8 -18 (duulimaad ballaadhan oo loo fidiyay Eleuthera) iyo Bimini, Luulyo 22 - 25 iyo Julaay 29 - Ogast 1, 2021. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khidmadaha diiwaangelinta iyo macluumaadka kale, fadlan booqo Bahamas.com/boating. Waxaa lagugula talinayaa in dadka daneynaya ay kaqeyb galaan kulanka Kabtanada ee Bahia Mar Marina ee kuyaala Fort Lauderdale. Kulamada waxaa la qabtaa Arbacada ka hor inta aan la tuurin oo si dhakhso leh ayey u bilaabmaan 6:30 pm
Bahamas oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo 16 goobood oo jasiirado u gaar ah, Bahamas waxay u jirtaa meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyadoo siisa fududaansho baxsi oo ka dhoofta dadka safarka ah meel ka baxsan nolol maalmeedkooda. Jasiiradaha Bahamas waxay leeyihiin kalluumeysi heer caalami ah, quusid, doonni, shimbiraha iyo waxqabadyo ku saleysan dabeecadda, kumanaan mayl oo ah biyaha ugu caansan adduunka iyo xeebo aan hagaagsaneyn oo sugaya qoysaska, lammaanaha iyo dalxiisayaasha. Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan https://www.bahamas.com/ ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.